Xinhua Myanmar - ဂီနီနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးများဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းစတင်
ဂီနီနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးများဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းစတင်
တရုတ် ကာကွယ်ဆေး ဂီနီနိုင်ငံ
ဂီနီနိုင်ငံ ကာနေလ်ခရီလ်မြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံက ကူညီထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူရန် စောင့်ဆိုင်းနေသူများကို မတ် ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) WORLD
ကာနေလ်ခရီလ်၊ မတ် ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဂီနီနိုင်ငံ မြို့တော် ကာနေလ်ခရီလ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများဖြင့် တရားဝင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်ကို မတ် ၅ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ဘာသာရေးဝန်ထမ်းများ၊ အဓိကတာဝန်ယူထားသော ပြည်သူများနှင့် အသက် ၆၅ နှစ်အထက်ရှိသူများသည် ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Remy Lamah က ပြောခဲ့သည်။
ဂီနီနိုင်ငံ ကာနေလ်ခရီလ်မြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံက ကူညီထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို မတ် ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးများဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်သည် ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကို ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေမည်ဖြစ်သလို ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရန်လည်း မျှော်လင့်ချက် ပိုမိုရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂီနီနိုင်ငံတွင် တရုတ်ကာကွယ်ဆေး ပထမဆုံးထိုးနှံခဲ့သည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း Mohamed Conde က ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ်သည် ကာနေလ်ခရီလ်မြို့သို့ မတ် ၃ ရက်က ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဂီနီနိုင်ငံတွင် မတ် ၅ ရက်အထိ COVID-19 လူနာ ၁၆,၄၂၀ ဦးရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၉၃ ဦးနှင့် ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၁၅,၀၉၁ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
CONAKRY, March5(Xinhua) -- Guinea launched its official vaccination campaign against COVID-19 with Chinese vaccines on Friday here in its capital.
As of Friday, the country has recorded 16,420 COVID-19 cases with 93 deaths and 15,091 recoveries. Enditem
1- People line up forashot of China-aided vaccine in Conakry, capital of Guinea, March 5, 2021. Guinea kicked off its COVID-19 vaccination campaign on Friday with the first batch of vaccine donated by China. (Xinhua)
2- 3-A man receivesashot of China-aided vaccine in Conakry, capital of Guinea, March 5, 2021. Guinea kicked off its COVID-19 vaccination campaign on Friday with the first batch of vaccine donated by China. (Xinhua)
Previous Article ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံတွင် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဗီဇပြောင်း COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ စတင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
Next Article (နိုင်ငံတကာကပ်ရောဂါသတင်းစုစည်းချက်) တရုတ်နိုင်ငံက အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်အား COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးများထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံအချို့က ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေး တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လာ